Kedu ihe bụ Kumagai Tsuneko Memorial Hall | Kumagai Tsuneko Memorial Hall
Emepere Halllọ Nzukọ Ncheta nke Tsuneko Kumagai n'April 1893 site n'aka Tsuneko Kumagai (1986-1990), onye na-arụsi ọrụ ike dị ka onye na-eduga na akwụkwọ ụmụ nwanyị kana na oge Showa, mgbe ọ rụzigharị ụlọ ya ebe o bi.N'ụlọ nzukọ ncheta, ị ga-ahụ ọmarịcha ịma mma Tsuneko ka ị na-ejigide ikuku nke ụlọ gị nke ewuru na 1936.
Ọnọdụ nke ụlọ ngosi.A na-egosipụta ọmarịcha oku ọrụ Tsuneko.
I nwekwara ike ihu ihe omumu nke Tsuneko jiri mee ihe.
Akwụkwọ nnụnnụ mkpirisi Tsuneko Kumagai
Amụrụ na Kyoto.
Di na nwunye Koshiro Kumagai na Kyoto wee kwaga Tokyo.
Mgbe ha rụsịrị ọrụ na Kawakita Sakuramine (Showa 3) na Onoe Shibune (Showa 5), ​​gụrụ akwụkwọ na Takakage Okayama.
Natara onyinye onyinye Tohoku Daigo maka "Tosa Diary" nke egosiputara na ihe ngosi nke Taito Shodoin.
Debe ụlọ ọhụrụ (nke ugbu a Kumagai Tsuneko Memorial Hall dị na Ota Ward).
A họpụtara onye nduzi nke Japan Calligraphy Art Institute.
E guzobere Kenkokai.
E nyere nkuzi ihu ọha Calligraphy nye ya Onye isi okpueze Princess Michiko (nke bụ Onye Isi Nwanyị Nwanyị Ya ugbu a).
Bụrụ onye otu na-asọpụrụ nke Mainichi Shodo Association.
Bụrụ onye prọfesọ na Mahadum Daito Bunka.
Natara Okpueze nke Okpueze Dị Oké Ọnụ Ahịa.
Emebere dika onye ndụmọdụ nke Nitten.
Natara Okpueze nke Dị Oké Ọnụ Ahịa.
Ọ nwụrụ na Septemba 9 ka ọ gbara afọ iri itoolu na atọ.